Live for other!!
Focus on other eyes
what they want!!
The best bussiness is
ဘဝရဲ့ ခဏ တာ လေး !!!မင်္ဂလာ ပါ !!!Update တွေ လုပ်ပီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက် အောင် လုပ် ကြပါစို့!! ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲ ပီး ပတ်ဝန်းကျင် ကို ပြောင်းလဲ ကြပါစို့!!ကျွန်တော် ဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ သုံးလက တွေးတဲ့ အတွေးနဲ့ အခု တွေးပုံတွေးနည်း မတူတာကို ကြည့်ပီး အရမ်း ဆိုးနေတာတွေဟာ ဘဝအတွက် တကယ့် ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ လက်ဆောင် ကောင်းဖြစ်ပီး ကောင်းလာဖို့အတွက် အခွင့်အရေးဘဲ ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်!!
လူတွေဟာ မပြည့်စုံကြပါဘူး!!သင်လည်း အပါ အဝင် ပါဘဲ!! သင့်ကိုသင် ပြည့်စုံပီ လို့ ထင်တဲ့နေ့ဟာ သင်ကျ ရှုံးတော့တာပါဘဲ!! မပြည့်တဲ့ အိုးဟာ ဘာထည့်ထည့် ဝင်ပါတယ် !! ပြည့်နေရင် လျှံကျ ဖို့ဘဲ ရှိပါတော့တယ်.. အမှားတွေ လုပ်ရင်း update လုပ်ကြ ပါစို့....😊😊😊
၁၀နှစ် ဆိုတာ အတိတ် ကို ပြန်သွားကြည့်ဖို့ ခဏလေးဆိုပေမယ့်,,,တကယ့်ဖြတ်သန်းရတော့ အရမ်းရှည်လျားတဲ့ အိပ်မက် တစ်ခုလို့ တင်စားချင်ပါတယ်!! လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရိုင်းစိုင်းတာကနေ ယဉ်ကျေးလာကြတာပါဘဲ ..အတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းလဲ ကုန်ကြတာပါဘဲ...လိုက်လျောညီထွေအောင်သာ အစွမ်းမရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်..တိုင်းတပါးက ရထားတဲ့ ဆောင်းပုဒ်တစ်ခု ကျွန်တော် လက်ကိုင်ထားပါတယ် "အဲဒါကတော့ သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဆာလောင်မှုက်ို ရှာပီး ဆာလောင်တာတွေ တိုက်ကျွေးပါ"ဆိုတာပါဘဲ!!ကုသိုလ် ရအောင် မလှုပါနဲ့ !!! လှုချင်လို့ ကုသိုလ် လာတာဘဲ ဖြစ်ပါစေ!!
သူတို့တွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မရယ်မပြုံးတတ်တဲ့ လူဆိုးကြီး ..အရိုင်းကြီး ပြုံးတတ် လာနေရုံမက သူများတစ်ဖက်သားအတွက်ပါ ဦးစားပေးလာတတ်နေပါပီ!!
We are today!!
လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ညို့ယူတဲ့ပညာတတ်ပီး communication ပိုင်းကို ဆရာတစ်ဆူအဖြစ် ထမ်းဆောင်တယ်!!!
ကိ်ုယ့်ထက် အသက် ၇နှစ် ငယ်ပေမယ့် အတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ ဆရာတစ်ဆူ !!
Miss လေး အောင်မြင်ပါစေ!!
Copyright 2018 loosekay.com